Vaovao - Raharaha efatra mila fiheverana amin'ny fampiasana jammers amin'ny telefaona finday ho fiarovana ny famantarana amin'ny kaonferansa
Raharaha efatra mila fiheverana amin'ny fampiasana jammers amin'ny telefaona finday ho an'ny fiarovana amin'ny signal mandritra ny fihaonambe
Amin'izao fotoana izao dia maro ny marika famantarana ny telefaona finday eny an-tsena, saingy mizara ho sokajy roa izy ireo: milina injeniera sy milina tsotra. Araka ny lazain'ny anarany, ny milina fanaovana injeniera amin'ny ankapobeny dia ampiasaina amin'ny tetikasa avo lenta sy avo lenta. Ny toetran'izy ireo dia mitaky fampisehoana marin-toerana, fampifanarahana asa arakaraka ny tontolon'ny onjam-peo eo an-toerana, ary fiasana tsy tapaka tsy tapaka 24 ora. Ny telefaona mahazatra dia fitaovana izay matetika ampiasaina mandritra ny fotoana fohy mandritra ny fotoana fohy. Tsy fantatra ny zava-bitany, izay mety hisy fiatraikany amin'ny fambara ataon'ny hafa hampiasa telefaona finday, ary mety hanakana ny faritra tianao ho sakanana ihany koa nefa tsy azo ampiharina tsara.
Matetika dia tsy dia misy olona firy ao amin'ny efitrano fivoriana, ary ny olona vao mivory rehefa mila manao fivoriana izy ireo, ary miaraka amin'izay dia misy toe-javatra iray mivangongo finday. Mandritra ny fivoriana dia tena azo inoana fa haneno mandritra ny fotoana fohy ny telefaonin'ity olona ity, ary hiantso fotoana fohy ny findain'io olona io. Noho izany dia tena ilaina ny mametraka ampinga efitrano fihaonambe. Amin'ny lafiny iray, manapaka ny fahatapahan'ny telefaona finday amin'ilay fivoriana izy, ary amin'ny lafiny iray, afaka manampy amin'ny fomba mahomby ny tsiambaratelon'ny atiny fihaonana ihany koa izy io.
Noho izany, inona ny fepetra raisinao amin'ny fisafidianana ireo jammera finday ho fiarovana amin'ny signal ao amin'ny efitrano fihaonambe?
1. Safidio avy amin'ny mpanamboatra mahazatra ny fitaovana fiarovan-tena, aleo miaraka amin'ny tatitra fitsapana navoakan'ny Ministeran'ny Filaminam-bahoaka;
Faharoa, mba hiantohana ny fahombiazan'ny vokatra miaro, miezaha mampiasa milina injeniera, toy ny milina azo alefa amin'ny injeniera, izay azo sokafana rehefa ilaina, ary azo akatona aorian'ny fampiasana azy;
3. Alohan'ny hametrahana azy dia andramo ny manandramana mizaha famantarana ireo finday eo an-toerana mba hiarovana azy ireo tsara nefa tsy hanelingelina ny hafa na handany herinaratra;
Fahefatra, mandoa izay aloanao ianao. Rehefa mamela ny teti-bola, manandrama mifidy fitaovana avo lenta, izay afaka mamonjy olana be tsy ilaina.